Kalenda Ego nke Forex - Mụta ahia 2
Mmemme akụ na ụba mba ụwa nwere mmetụta dị ukwuu na ahịa ego. Mgbe ị na-ere ngwaahịa, indices, cryptocurrencies ma ọ bụ forex abụọ, nghọta zuru oke nke ihe omume kalenda akụ na ụba dị oke mkpa na ịmachi ihe egwu ma na-eme ka uru baawanye.
Mụọ 2 Azụmaahịa na-enye ndị ahịa kalịnda akụ na ụba zuru oke, jisiri ike n'oge. Na mgbakwunye na usoro mmụta nke ihe omume ọ bụla dị mkpa, tweets dị ndụ na-enye nghọta bara uru banyere ihe omume na-aga n'ihu. Ma onye ọ bụla na-agbaso Forex, cryptocurrencies, commodities ma ọ bụ indices, na-adị ọhụrụ na mkpa ahịa isi na-enweta ezigbo oge Tweets si anyị ọkachamara nyocha dị ka ihe omume na-ewere ọnọdụ dị oké mkpa maka ịga nke ọma ịghọta ihe omume akụ na ụba ọ bụla.
Kalenda Azụmaahịa Azụta nke Mụta 2 bụ ngwa dị ike yana mkpa maka ndị ahịa nwere mmasị na azụmaahịa na-ebugharị ahịa na ezigbo oge.
Economic Kalinda site TradingView
Kedu ihe Na-amụta Kalenda Economic Economic nke 2 Azụmaahịa?
Ahịa ihu nwere ike ịbụ ikuku na-eme ngwa ngwa, nwere ike ịgbanwe ụzọ na ntabi anya. Otu n’ime ihe mere o ji dị egwu bụ na ịhapụ akụkọ akụkọ akụ na ụba, akụkọ, na ndekọ ọnụ ọgụgụ site n’oge ruo n’oge. Iji nọrọ na asọmpi asọmpi asọmpi, ọ dị oke mkpa na onye na-azụ ahịa na-arụ ọrụ nwere ike ịnweta kalenda usoro iwu zuru oke. Ngwá ọrụ dị ike na ụlọ ahịa nke onye ọ bụla na-ere ahịa, kalenda Learn 2 Trade's FX bụ njikọta nke nyocha ọkachamara na teknụzụ na-enweghị atụ. Igosipụta ihe omimi miri emi banyere mgbanwe ahịa mba ofesi ọ bụla dị mkpa, yana nghọta bara uru banyere ịwepụta ọkwa ọ bụla nwere n'ahịa, kalenda ihu igwe na Mụta 2 Trade bụ ebe mbido maka onye na-azụ ahịa nọ n'ọrụ. O zughị ezu ịmara mgbe ihe omume akụ na ụba ga-ewere ọnọdụ. Inwe nka ịghọta mmetụta na ọkacha mmasị gị ego ụzọ, nakwa dị ka ahịa dị ka a dum, bụ nke kasị mkpa. Nke ahụ bụ ihe na-eme ka kalenda anyị dị iche iche - ọ na-enye ọ bụghị naanị data siri ike kama ọ bụ ọnọdụ gbara gburugburu nke nwere ike inye aka melite azụmaahịa gị.